Mask nge-dimexid yezinwele, sebenzisa. Mask for izinwele nge dimexid ekhaya, zokupheka.
Amaski ezinwele nge-dimexidom
Ukuqinisa nokubuyisela ukukhiya kungenzeka ngezindlela ezingabizi, kodwa ezisebenzayo zamakhemikhali - i-demixidum. Ngaphezu kwalokho, lesi sidakamizwa sithuthukisa i-microcirculation yegazi futhi sinomthelela we-antimicrobial, okwenza kube lula ukusebenzisa i-dimexide ekulweni nokuhlukunyezwa kwegazi. Izinzuzo zamaski nge-dimexid kanye nezindlela ezinhle kakhulu zokupheka ekhaya ezinwele futhi zizoxoxwa ngokuqhubekayo.
I-Dimexide kwezinwele: izakhiwo eziwusizo nesicelo
I-Dimexide iyilungiselelo lwezokwelapha elisetshenziswa kabanzi ekwelapheni ubuhlungu obubangelwa imisipha, amanxeba ahlanzekile, izinqubo zokuvuvukala nezifo zesikhumba. Ihlinzeka ngomphumela wokubulala umzimba olwa nesifo sokulwa nesifo sokulwa nesifo sokulwa nesifo sokuvimbela, Kodwa isici esiyinhloko se-dimexide sisekhono layo lokungena ezingxenyeni ze-biological futhi "ukuthwala" ngokuqondile izinto eziwusizo zamaseli. Yilo msebenzi oqondile wesidakamizwa esetshenziswa ku-cosmetology, ikakhulukazi, ekwelapheni izinwele.
Inqubo evamile kakhulu futhi ephumelelayo yezindlebe zokugqoka izindandatho nge-dimexid iyi-mask. Ngenxa yamakhono ayo athungathayo, lesi sidakamizwa sidlulisa phakathi kwama-vithamini we-shaft nezinwele, eziqukethwe kwezinye izingxenye zomuthi. I-dimexid ephumelela kakhulu isebenza ngamafutha emvelo (burdock, castor, umnqumo), izikhathi eziningana ukuqinisa umphumela wabo omuhle ngezinwele ezilimele. Ngokushintsha izithako bese uhlola izithako, kungenzeka ukwazi ukulungisa imaski encane yokuxazulula izinkinga ezihluke ngokuphelele.
Amaski ane-dimexid: ama-best zokupheka ekhaya ezinwele
Ukuvuselela imaski ngokuqukethwe kwamafutha
I-Dimexide - 1 tbsp. l.
amavithamini A, ama-E-5 amathissi ngalinye
Ukunakwa sicela! Ukwehluleka ukugcina izilinganiso kungabangela ukungathandeki, ukuhlaziya nokushisa ngisho nokushisa. Ngakho-ke, uma uxuba i-dimexide nezinye izithako kunoma iyiphi imaski, qaphela inani eliqondile lezithako ezichazwe iresiphi.
Cindezela ijusi kusuka kulamula bese ungena esitsheni. Kuzothatha cishe isipuni esisodwa.
Thela ijusi lemon i isipuni semithi, ihlanjululwa ngamapuni wezipuni ezimbili zamanzi afudumele.
Engeza amavithamini kumaski bese uhlanganise kahle.
Faka isicelo ezimpandeni nasemaceleni imizuzu engu-20.
Ngemuva kwesikhathi, geza izinwele zakho kahle nge-shampoo.
Mask nge dimexidum ukuqinisa ama-curls
i-burdock namafutha we-castor - 1 tbsp. l.
Ama-capsules e-Vitamin E - 3
Amafutha omuthi wetiyi - amahlumela angu-3-5
Hlanganisa ingilazi yeglasi noma ye-porcelain yamafutha.
Thela inhlanganisela yamafutha inani elidingekayo lamanzi ahlanjululwe ngesilinganiso sokulungiselela oku-2: 1.
Hlanganisa ubukhulu bese ucindezela ama-capsules ka-vitamin E.
Bese wengeza amafutha abalulekile.
Ukulungiswa okulungiselelwe kufaka ama-curls futhi ugcine imizuzu engu-40.
Hlanza ngamanzi afudumele kanye nomswakama.
Umaski nge-dimexid for curls ezilimele futhi elincanyana.
iqanda - 1 pc.
I-Dimexide - 1 tsp.
I-Vitamin B6 - 1 i-ampoule
amavithamini A, E - 3 amakhemikhali ngamunye
Hlukanisa i-isikhupha kusuka kwiprotheni bese ululaza kalula.
Engeza e-yolkini i-spoonful ye-dimexide, ihlanjululwe ngamaspuni amabili wamanzi afudumele.
Khipha amanzi avela kuma-capsules amavithamini A no-E.
Vula i-ampoule nge-vitamin B6 futhi uthele okuqukethwe kwayo kusikhulu.
Hlanganisa zonke izithako bese usebenzise imizuzu engu-30 ngezinwele.
Geza umkhiqizo ngamanzi apholile, ugeze ngaphambilini nge-shampoo.
Izitayela zezimfashini zokuqeda iziqu ezingu-2016 ngezinwele ezinde, eziphakathi naphakathi.
Masks izinwele ebusuku
Inkambo yemvelo: Izindlovu ze-High Fashion Week-2016
Ukukhanyisa izinwele nge-sinamoni
Ukwelashwa kwezinwele ezibuhlungu
I-ayisikhilimu enekhofi nama-biscuits ne-tshokoledi
Ama-Mandarins - imfihlo yesibalo esincane
Kusho ukunakekelwa ngomlomo
I-chocolate yifaka ekhaya
Uma umama engumninimzi oyinhloko emndenini
Ukuqiniseka - umbono omuhle emhlabeni
Ukuhlobisa umshado womlobokazi
Kusho ukulahlekelwa isisindo "Xenical"
Uma kufanele usebenze eqenjini labesifazane
Nougat ngamantongomane nezithelo zomisiwe
I-Pertussis: izimpawu, izimpawu, ukwelashwa
Izindlela zokwelapha zomphakathi zokudoba: izindawo zokupheka zasemakhaya eziphumelela kakhulu